Fanafihana mitam-piadiana :: Vehivavy lehibe maty voatifitra • AoRaha
Nindaosin’ny fahafatesana noho ny hetraketraky ny jiolahy ny vehivavy iray, 68 taona, voatafika tao an-tranony, tany Ankarongana, Antsiranana II, omaly tokony ho tamin’ny roa ora maraina. Voatifitra teo amin’ny kibony ilay vehivavy lehibe. Tsy nahatsiaro tena ny vadiny rehefa nofafazan’ireo olon-dratsy ranon-javatra. Voaroba ny vola be.
Amina tanàna mitokantokana, any amin’ny 17km miala ny lalam-pirenena fahenina, izay any amin’ny 25km miala ny renivohitr’Antsiranana no misy an’ity trano voatafika ity. Efadahy nitondra basy “kalachnikov” no nanao ny asa ratsy. Fantatra tamin’ny angom-baovao nataon’ny mpitandro filaminana fa avy nivarotra omby tany Antsiranana, herinandro lasa izay, ireto voatafika ka nahazo volabe. Mety ho mahafantatra ny fisian’io vidin’omby io ireo jiolahy.
“Sendra tany ivelany ny lehilahy tompon-trano no nigadona ireo jiolahy. Ny vadiny tao an-trano no nitakiana ny vola vidin’ ny omby namidy. Mety ho nanohitra ilay vehivavy ka notifirin’ireo mpanafika. Ilay lehilahy kosa nofafazan’izy ireo ranon-jafatra, teo am-pidirana ny trano. Vola hafa valo tapitrisa ariary volampiangonana no hitan’ireo jiolahy”, hoy ny zandary, tany antoerana.